उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीले खाना खान थाले
मंसिर १३, काठमाडाैँ । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै एकसाता अस्पतालमै रहने चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन्।
शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री दश दिनपछि नियमित काममा फर्कन सक्ने जानकारी दिएका हुन्। उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको, उनले नियमित खाना खान थालेको र केही दिनमै आइसियुबाट बाहिरिने जानकारी पनि चिकित्सकहरुले दिएका छन्। उनले अहिले अस्पतालमै हिँडडुल गर्नसमेत सुरु गरेका छन्।
त्यस्तै चिकित्सकहरुले एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि सघनकक्षमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबार र बुधबार गरी दुईपटक डायलाइसिस गरिएको पनि जनाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई मुखबाट ठोस खानेकुरा खुवाउन थालिएको जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री ओली समान्य हिँडडुल गर्न थालेको समेत डा. सिंहले बताइन्। उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्रीको एपेन्टिडसाइटिस फुटेको नभई पाकेर फैलिएको बताएका छन्।
सामान्य बिरामीको तुलनामा अंग प्रत्यारोपण गरिएको बिरामीमा एपेन्डिसाइटिस पाकेर फैलने सम्भावना बढी हुने जानकारी चिकित्सकहरुले दिए। १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ। उनले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि केही महिना कुर्नुपर्ने पनि चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्।
पछिल्लो पटक ग्राण्डी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलाको डायलाइसिस गरिँदै आएको थियो। अहिले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमै डायलाइसिस गरिएको हो।
पश्चिमी वायुको प्रभावले, एकाएक चिसि बढ्यो
राज्यको दमन असफल भएको छ : ओमप्रकाश पुन
मन्त्री योगेश निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहसमा जान तयार
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघमा सिर्जना राणा
विप्लव नेकपाले देशका विभिन्न ठाउँमा नेपालको नक्सा प्रर्दशन गर्याे
बुटवलमा सडक बालबालिकाहरुलाई न्यायो कपडा सहयोग
४० वर्षीया महिलालाई बला'त्कार गरेको आरोपमा सल्यानमा एकजना प'क्राउ
पत्रकार महासंघ दाङले १८ जना पत्रकारलाई सम्मान गर्ने
सल्यानमा ३६ जनाले 'पत्रकार परिचयपत्र' लिए